Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Ihotele eNtsha yaseBlossom eHouston Ivula iingcango zayo
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IBlossom Ihotele iHouston
Ihotele yaseBlossom iHouston, ipropathi entsha yobunewunewu yaseHouston, iyakuvuyela ukuvuleka namhlanje kwiindwendwe kunye noluntu. Ifumaneka kwi-7118 Bertner Avenue kunye ne-NRG Stadium engabamelwane, iZiko lezoNyango laseTexas kunye neendawo zokuzonwabisa ezidumileyo, ihotele yanamhlanje ijonge phambili ekwaziseni uluntu lwaseHouston kunye noluntu olukhulu kwizinto zalo ezikumgangatho wehlabathi, ukutya okulungileyo, kunye neendawo eziphakamileyo zeentlanganiso kunye neziganeko.
Ihotele entsha yodidi oluphezulu e-Houston ivula ngezinto eziphucukileyo, amagumbi eendwendwe kunye neesuti, iphuli ephezu kophahla, kunye nezicwangciso zeekhonsepthi zokutya ezikhokelwa ngabapheki ababini abaneenkwenkwezi ze-Michelin.
Ihotele yazisa izibonelelo zexesha elilinganiselweyo ngexesha leeholide.
Ihotele yaseBlossom iHouston yawongwa ngembasa ye-COVID Hero ngenxa yenkxaso yayo kuluntu lwengingqi ngexesha lobhubhani kunye nesaqhwithi sasebusika.
“Ukulandela ixesha lokuzama isixeko sethu kunye norhulumente kwezi nyanga zili-18 zidlulileyo, siye IBlossom Ihotele iHouston bachulumancile ngokunikezela ngepropathi eluntwini,” utshilo uAlbert Ramirez, umphathi jikelele weBlossom Hotel Houston. “Siyazingca ngokubonelela ngamathuba engqesho eluntwini kwaye negalelo ekuvuseleleni uqoqosho lwasekhaya ngalo lonke ixesha sinikezela iindwendwe zethu indawo yokuhlala etofotofo kodwa etofotofo ngenkonzo ekumgangatho ophezulu kunye nezinto eziluncedo.
Ihotele yaseBlossom iHouston isandula kunikwa imbasa yeQhawe le-COVID yi-Houston's Asian Chamber of Commerce ngenxa yenkxaso yayo kuluntu lwengingqi ngexesha lobhubhane kunye nesaqhwithi sasebusika ekuqaleni konyaka. Ihotele ikwavuyiswa kukubizwa ngokuba yiHotele eseMthethweni yeqela leNtenetya yeTafile yase-USA. Ngaphantsi kwesivumelwano, iyunifomu yeQela leTebhu yeSizwe yase-US iya kubonisa ilogo yeBlossom Hotel Houston.
I-Blossom Hotel i-Houston iphinda ibe nemincili ukubhengeza intsebenziswano kunye ne-Houston Astronomical Society ukusingatha uluhlu lweziganeko zeenkwenkwezi kunye neseti yokuqala eya kuqhubeka ngoLwesine, ngoNovemba 11 ukusuka kwi-6: 30 ukuya kwi-8: 30 pm Isiganeko "seLunar Evening", evuleleke kwiindwendwe kunye noluntu, iya kwenzeka kumngangatho ophezu kophahla lwehotele enembonakalo emangalisayo yesixeko kunye nokufikelela okungenazithintelo esibhakabhakeni sasebusuku. Isiganeko sokuwa siqalisa uthotho olutsha kwimisebenzi kunye nombutho ongenzi nzuzo apho imali enikezelweyo iya kunceda ukufikelela kuluntu kunye nemigudu yemfundo ye-Houston Astronomical Society.
Ukusuka kwindawo esembindini kufutshane neNRG Stadium, isithili semyuziyam esidumileyo, ivenkile, indawo yokutyela kunye neyokuzonwabisa, ihotele entsha yamkela iindwendwe ukuze zifumane iindawo ezinomdla ezisingqongileyo kunye nokuziva zihlaziywa kwaye zihlaziyekile kwindawo enezixhobo ezikumgangatho ophezulu, ububele bodidi lwehlabathi, kunye nokulungileyo. yokutyela. Ukongeza, njengeyona hotele yodidi oluphezulu ebumelwaneni nelona ziko lezonyango likhulu emhlabeni, ihotele inika iindwendwe amava okwamkela iindwendwe ngelixa bezisiya kwidinga kunye neenkqubo ezibalulekileyo.
Ihotele enemigangatho eyi-16, eya kuba neqonga elikhulu ukuvulwa ekuqaleni kuka-2022, inikezela ngamagumbi eendwendwe angama-267 abukekayo kunye neesuites kwaye ngaphezulu kwe-9,000 yeenyawo zesikwere zeentlanganiso eziguquguqukayo kunye neendawo zeminyhadala. Iziko lokuzilolonga elikwisiza, elikwinqanaba eliphezulu elifakwe yiPeloton® lifikeleleka kwiindwendwe iiyure ezingama-24 ngosuku, kunye nenkonzo yezobuxhakaxhaka yeelwimi ezininzi eya kuthi ihlangabezane nasiphi na isicelo sondwendwe ngenqanaba lenkonzo eyenzelwe wena elindelekileyo evela Iihotele ezintle kakhulu ze-boutique. Ihotele ikwanedama elimangalisayo eliphezu kophahla kunye negumbi lokuphumla eliqhayisa ngeembono ezinzulu zedolophu yaseHouston.
Uyilo oluphucukileyo lwepropathi lubandakanya isitayile esisulungekileyo, esincinci kunye nombala ophefumlelweyo wenyanga obonisa ukukhanya okumangalisayo, ubuninzi beCarrera marble, iisilingi zetreyi ezizodwa, umgangatho weplanga elunxwemeni kunye nokwenziwa okutofotofo kuyo yonke ipropathi. Amagumbi eendwendwe kunye neesuites aneendawo zokuhlala eziphangaleleyo ezinokukhanya kwendalo okuninzi kwaye axhotyiswe ngeWi-Fi encomekayo, i-Samsung Smart TVs ephezulu, iDyson hairdryer, iNespresso coffeemakers, iDigital Newspapers enePressReader®, kunye negumbi lokuhlambela lebhastile elinebhastile. iintloko zeeshawara kunye nezinto ezikhethekileyo ze-Aqua Di Parma™ ukuhlangabezana kunye nokugqithisa iimfuno zeshishini, ulonwabo kunye nabahambi abagxile kwezonyango.
Ukuqhayisa ngaphezu kwe-9,000 yeenyawo zeenyawo zeentlanganiso kunye nendawo yeziganeko, iBlossom Hotel Houston inenqanaba lendawo yesiganeko esinemisebenzi emininzi enikezelwe kwiinkomfa zoshishino kuzo zonke iinkalo ezahlukeneyo kunye namashishini kunye neziganeko zentlalo. I-Luna Ballroom ebukekayo enomgangatho ukuya kwisilingi yeefestile ixhotyiswe ngesakhono se-audiovisual sanamhlanje ukuze ikwazi ukwamkela iintlanganiso kunye neenkomfa kwaye inokonwabisa ukuya kuthi ga kwi-250 abantu. Ihotele ibonelela ngeendawo zeminyhadala ezilithoba ezongezelelweyo ezinobuninzi bokukhanya kwendalo kunye nezicwangciso zomgangatho oguquguqukayo. Kwimitshato yotyikityo eyilwe ngobunono bobugcisa, iBlossom Hotel Houston inika uluhlu lwesetingi zeziganeko ezikhethekileyo zesibini.
Ekuqaleni kuka-2022, iBlossom Hotel Houston iceba ukunika iindwendwe kunye nabahlali iikhonsepthi ezimbini zokutyela ezahlukeneyo ngentsebenziswano nabapheki ababini abadumileyo beMichelin. Ipropathi nayo iya kuba negumbi lokwamkela iindwendwe eliza kuba nemenyu yokutya kunye neziselo ezijongwa ngabapheki, kunye negumbi lokutyela kwiindwendwe ezibonelela ngeendleko zamazwe ngamazwe kunye nezaseMelika. Iinkcukacha malunga neprogram ye-culinary kunye nabapheki emva kweendawo zokutyela ziya kwaziswa ngokukhawuleza.
Ihotele yaseBlossom iHouston ikwi-7118 Bertner Avenue eHouston, eTexas. Ngokudibana nokuvulwa okuthambileyo, ihotele yazisa iintengiso zeholide phakathi kwangoku kunye ne-31 kaDec, 2021. Iindwendwe zingabhukisha iitheko zeshishini leeholide kunye nemisitho yokutya yabucala ukusuka kwi-USD95 ngomntu ukuya phambili. Ubhukisho lwamagumbi lufumaneka ukusuka kwi-USD289.00 ukuya phambili kuquka nokupaka okuncomekayo.
Ukubhukisha kunye nolwazi oluthe kratya ngeBlossom Hotel Houston, nceda undwendwele BlossomHouston.com.
Malunga neBlossom Hotel Houston
Ihotele yaseBlossom iHouston ibonelela ngamava avela kumazwe ngamazwe amiliselwe nzulu kwi-Space City. Ihotele ibeka iindwendwe nje amanyathelo ukusuka kwiziko lezonyango likhulu kwihlabathi kunye namashishini aphezulu e-Houston kunye neendawo zokuzonwabisa, kwaye njengeyona hotele ikufutshane ne-NRG Stadium, ikwayimizuzu ukusuka kwiindawo ezinomtsalane zaseHouston. Nokuba zihambela iimfuno zonyango, ishishini okanye ulonwabo, iindwendwe zinokonwabela ukwahluka kweHouston, ekwabonakaliswa kwihotela ye-chic yeengcambu kwiingcambu ze-aerospace yesixeko, ngelixa zithatha ithuba lokuthenga ivenkile yehotele, iindawo zokutyela ezimbini ezigxile kumpheki, izibonelelo ezingahambelaniyo. kunye neenkonzo, amagumbi eendwendwe obutofotofo kunye nentaphane yemisitho kunye neendawo zokuhlangana. Ngolwazi oluthe vetshe, nceda undwendwele BlossomHouston.com, Okanye silandele Facebook kwaye Instagram.